“Messi waligiis ma joogi doono… Griezmann waa mustaqbalka Barcelona” – Olivier Giroud – Gool FM
“Messi waligiis ma joogi doono… Griezmann waa mustaqbalka Barcelona” – Olivier Giroud
(Yurub) 07 Okt 2020. Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa xaqiijiyay aragtidiisa ku aadan in Lionel Messi uusan waligiis sii joogi doonin Barcelona.
Dhinaca kale Olivier Giroud ayaa carabka ku adkeeyay in xiddiga ay dhalashada wadaagaan ee Antoine Griezmann uu yahay mustaqbalka kooxda reer Catalonia ee Barcelona.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Olivier Giroud, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Way cadahay in Griezmann uusan dooranin wadada ugu fudud ku biiritaankiisa koox weyn sida Barcelona, tani waa horumar ku saabsan xirfadiisa, ma jiraa qof diidi kara taas?”.
“Dabcan, la qabsiga ma ahan wax fudud, gaar ahaan maadaama aad la ciyaareyso ciyaaryahan weyn sida Messi oo kale”.
“U ciyaarista Barcelona waa tartan adag, laakiin wuxuu awoodaa inuu la dhaqmo xaalada, sidoo kale waa mustaqbalka kooxda, sababtoo ah Messi waligiis ma sii joogi doono”.
Antoine Griezmann ayaa ku biiray kooxda Barcelona bishii July ee sanadkii hore, isaga oo kaga soo biiray Atletico Madrid, tan iyo waqtigaas Griezmann wuxuu ka qeyb galay 51 kulan tartamada oo dhan ee naadiga reer Catalonia, isagoo dhaliyay 15 gool, wuxuuna caawiyay 4 gool kale.
Si kasta ha noqotee, Antoine Griezmann ayaa sugaya tartan weyn xilli ciyaareedkan, iyadoo taageerayaasha Barcelona ay rajeynayaan inuu ku guuleysto inuu noqdo badelka Luis Suarez oo xagaagan ku biiray kooxda Atletico Madrid.
10-kii heshiis ee ugu sarreeyey oo ka dhacay suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan, kaasoo xalay la soo gabagabeeyey